Chrysoprase macnaha dhagaxa. Gemstones badanaa waxay u isticmaalaan dahabka - muuqaal
macdanta dhagaxa chrysoprase. Chrysoprase cabochon gemstones waxaa badanaa loo isticmaalaa dahabka: giraanta, silsiladaha, hilqadaha, guluubka, jijimooyinka, pendant.
Chrysoprase, oo sidoo kale loo yaqaan agate cagaaran maaddaama magaca ganacsigu uu yahay dhagax gemstone oo noocyo kala duwan ah, nooc cryptocrystalline ee silica, oo leh tiro yar oo nafaqeysan. Midabkeedu caadi ahaan waa cagaar tufaax ah, laakiin wuxuu ku kala duwan yahay cagaar qoto dheer. Noocyada mugdiga ah ee chrysoprase waxaa sidoo kale loo yaqaan prase. Si kastaba ha noqotee, ereyga 'prase' waxaa sidoo kale loo isticmaalaa in lagu sharraxo chlorite-ka lagu daro "quartz", oo ilaa xad cayiman ayaa ah midab soo saare, halkii ay ka ahaan lahayd macdanta si adag loo qeexay.
Quaterka loo yaqaan 'Cryptocrystalline quartz'
Chrysoprase waa cryptocrystalline, taas oo macnaheedu yahay in uu ka kooban yahay crystals sidaas aad u fiican in aan la arki karin sida qayb ka duwan sida koritaanka caadiga ah. Tani waxay ka dhigtaa marka laga reebo macdanta dhagaxa, ametid, citrine, iyo noocyada kale ee quartz. Xubnaha kale ee qoyska silica cryptocrystalline waxaa ka mid ah agate, carnelian, iyo onx. Si ka duwan noocyada badan oo aan lahayn hufnaanta silica, waa midabka of chrysoprase, halkii kasta oo tusaalooyin calaamadaha, taas oo ka dhigaysa mid macquul ah.
Si ka duwan emerald oo leh midabkeeda midabka cagaaran ee joogitaanka chromium, midabka ayaa sabab u ah qiyaasta xayiraadaha nickel ee qaabka aad u yar. Nikel waxaa lagu soo waramayaa in uu dhaco sida silicates kala duwan, sida keerolit ama pimelite, ma aha macdanta NiOO, bunsenite, sida hore loo soo sheegay. Waxay ka dhalataa cimilada qotodheerta ama dibudhiska ee serpentinites nikeliferous ama dhagaxyada kale ee ultramafic. Dhismaha Australiya, waxay u dhacdaa sida xididada iyo noodullada leh goetite brown iyo oxides kale oo birta ah oo ka mid ah dhuunta jilicsan ee macdanta ah ee ka hooseeya birta iyo silica.
Sida noocyada kala duwan ee loo yaqaan 'chalcedonyony', chrysoprase waxay leedahay adag tahay 6 ilaa 7 oo ku saabsan miisaanka adag ee Mohs iyo jeexjeexin jilicsan sida dhagax.
Ilaha ugu caansan ee chrysoprase waa Queensland, Galbeedka Australia, Haneti Tansaaniya, Jarmalka, Booliska, Ruushka, Arizona, California, iyo Brazil. Dhibaatooyinka ku yaal bartamaha Tansaaniya waxay ku jireen wax soo saarka joogtada ah ilaa 1986. Dhagax iyo Ni silicate macmacaan ee Szklary, Silesia, Poland, waxay ahayd suurta galnimada dhagaxyada ugu weyn ee Yurub iyo suurto galka ugu weyn ee adduunka.
Macdan aad u macquul ah waa chalcedony chrome, taas oo midabkeedu uu bixiyo chromium halkii nikkel.
Macdanta oxygen-ka, kooxda 'quartz team'
KHATARTA: Silica (silikon dioxide, SiO2)
DIIWAAN GALINTA: 2.58 – 2.64
BLUFRINGENCE: + 0.004
GACVITY SPECIFIC: 2.58 - 2.64
CUDURKA MOHS: 6.5 - 7
Chrysoprase bogsashada guryaha
Dhagaxyada Chrysoprase waxaa loo isticmaalaa in lagu dhiiri galiyo rajo, farxad, iyo qanac. Waxay kaloo u horseedaa guul iyo barwaaqo dhaqdhaqaaqyo cusub iyo xiriiro.
Haddii Chrysoprase kirismaska ​​uu noloshaada soo galay, u qaado calaamad muujineysa inaad ubaahantahay qaab kacsi shucuureed. Waxaa caan ku ah muujinta niyad wanaag, farxad, iyo farxad, dhagxaanta Chrysoprase waa mid ka mid ah dawooyinka lidka ku ah adduunka ee ugu fiican bogsiinta. Haddii aad haysato liis warbixineed oo ah noocyada xannuunnada shucuurta leh ee kala duwan sida niyad-jabka, walbahaarka, iyo walbahaarka, Chrysoprase guryaha loo yaqaan 'Crystalry' waa dawooyin wax ku ool ah oo lagu dhiirigelinayo aragtida wanaagsan ee nolosha. Ku hay gemstone-ka geeskaaga oo xusuusnow inaad had iyo jeer eegto dhinaca iftiinka ah, xitaa inta lagu jiro cimilada daruuro leh